Barasaabkii hore ee Nairobi Mike Sonko oo maxkamad la soo taagay | Star FM
Home Wararka Kenya Barasaabkii hore ee Nairobi Mike Sonko oo maxkamad la soo taagay
Barasaabkii hore ee Nairobi Mike Sonko oo maxkamad la soo taagay
Waxaa maanta maxkamadda ismaamulka Kiambu ka soo hor muuqday guddoomiyihii hore ee Nairobi, Mike Sonko.
Siyaasigan ayaa loo haystaa inuu sanadkii 2019-kii abuuray kicin dadweyne oo lagu dhibaateeyay 9 qof oo ku sugnaa dhul ku yaalla xaafadda Buruburu ee Nairobi oo ay leedahay shirkadda Landmark.
Shalay ayay ahayd markii Sonko uu tagay xarunta dhexe ee waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da isagoo su’aalo la weydiiyay waxaana uu xalay ku hooyday saldhigga booliska ee Muthaiga .
Dacwadda isaga iyo 5 eedeysanayaal oo kale ay wajahayaan ayaa ka socoto maxkamadda Kiambu .
Next articleShirka hogaamiyaasha Soomaalida oo Dhuusamareeb ka furmaya